Mareykanka oo soo dhaweeyay gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay xil muhiim ah – Balcad.com Teyteyleey
Mareykanka oo soo dhaweeyay gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay xil muhiim ah
By Abdi Malik	 On Jul 28, 2017
War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda Arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu faah faahiyaya waxyaabaha loo doortay gabadhaasi Soomaaliyeed oo ay ka guuleysatay tartamayaal badan.
Waxaa lagu sheegey qoraalkan in Munira Khalif oo ah Gabar Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Mareykanaka ay ku guuleysatay in ay xil ka qabato hay’adda Q. M. u qaabilsan Barnaamijka Youth Observer to United Nations oo ah horumarinta dahlinyarada ee UNA_USA oo la aas aasy sanadkii 2012kii si Dhalinyaradu ay uga qeybgalaan arrimaha Caalamiga ah.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa iyadoo la kaashaneysa Ururka Hay’addan Qaramada Midoobay qaybteeda Mareykanka ku faraxsan shaaca ka qaadista in Munira Khalif loo doortay inay noqoto qofka dhallinyarada ah ee sannadkan Mareykanka korjooge ahaan u metalaya Barnaamijka horumarinta dhalinyarad ee QM qeybta Mareykanka.
Munira Khalif oo ah gabar Soomaaliyeed oo reer Minnesota ah waxaa laga soo dhex xushay tartamayaal aad u badan kuwaasi oo kor u dhaafayaa ilaa 300 boqol oo qof waxayna ka kala socodeen Jaamacadaha kuyaala dalkaasi Mareykanak.
Munira waxay Jaamacadda Harvard ka barataa maadooyinka dhaqaalaha iyo maamulka dawladda,Waxay hore u aasaastay urur ka shaqeeya sidii gabdhaha Bariga Afrika u heli lahaayeen waxbarasho loo siman yahay.
Sidoo kale waxay si weyn Hay’adda Qaramada Midoobay uga ololeysay arrimaha dumarka iyo gabdhaha iyo in dhallinyarada la siiyo door xooggan oo ay uga qaybqaataan danaha guud.
Waxay ka geybgalaysaa Muniiro shirka 72aad ee Hay’adda UNA-USA oo magalaaad Newyorka ka dhacaya bishai September ee soo socota,ayadoo matalaysa Dhalinyarada Mareyakanka.
The post Mareykanka oo soo dhaweeyay gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay xil muhiim ah appeared first on Ilwareed Online.
Software Layout and style and Architecture – Student Essay Writing Services
UN Migration Agency, Japan Support Somalia’s Drought Committees’ Efforts to…
Somalia has commemorated the International Day of Peace with a…